Poptin: Popups Smart, Foomamka Dhexgalka, iyo Autoresponders
Sabtida, Diisambar 12, 2020 Isniin, November 22, 2021 Douglas Karr
Haddii aad raadineysid inaad ka soo saartid hoggaamiyeyaal badan, iibin, ama diiwaangelinno booqdayaasha soo galaya boggaaga, shaki kuma jiro wax ku oolnimada popups. Maaha wax fudud sida tooska ah u faragelinta martidaada, in kastoo. Soo-baxayaasha waa in si caqli-gal ah loo ilaaliyaa iyadoo lagu saleynayo hab-dhaqanka martida si ay u bixiyaan khibrad aan xuduud lahayn sida ugu macquulsan. Poptin: Qalabkaaga Popup Platform Poptin waa barxad fudud oo la awoodi karo oo loogu talagalay in lagu daro istaraatiijiyadda jiilka hoggaanka sidan oo kale ah ee ku jira bartaada. Madashu waxay bixisaa:
OneSignal: Ku dar Ogeysiiska Riixista ee Desktop, App, ama Email
Khamiista, Oktoobar 25, 2018 Khamiista, Oktoobar 25, 2018 Douglas Karr
Bil kasta, waxaan heli lahaa dhowr kun oo soo booqdayaal ah iyada oo loo marayo ogeysiisyada riixa biraawsarka ee aan isku dhafannay. Nasiib darrose, barxaddii aan dooranay hadda way xirmeysaa sidaa darteed waa inaan raadiyaa mid cusub. Kaaga darane, ma jirto qaab dib loogu soo dejiyo kuwii hore ee macaamiisha ahaa anagoo dib ugu soo celinayna boggeena sidaas ayaanu wax ku qaban doonnaa. Sababtaas awgeed, waxaan u baahday inaan doorto madal caan ku ah oo la cabbiri karo. Oo waxaan ka helay OneSignal. Kaliya maahan
Monday, July 6, 2015 Khamiis, Juun 9, 2015 Douglas Karr
Markaad akhrido labadan tirakoob, waad naxaysaa. In ka badan 45% dhammaan ganacsiyada ma laha degel. Iyo DIY-yada (Do-It-Yourselfers) ee bilaabaya dhisida goob, 98% ka mid ah ayaa ku guuldareystay inay daabacaan midkoodna. Tani xitaa ma tirinayso tirada ganacsiyada leh degel aan si fudud u wadin hoggaanka isn't oo aan aaminsanahay inay tahay boqolkiiba kale oo muhiim ah. Sawir-gacmeedkan ka socda Webydo wuxuu tilmaamayaa arrinta ugu weyn ee fashilantay